Oppo Tsvaga X4 Pro Specifications Tipped; Inogona Kusanganisira Snapdragon 845
November 28, 2021 by bartez64
Oppo Tsvaga X4 Pro smartphone inonzi yave kupinda mukutanga kwayo kuChina sezvo makiyi eiyo nharembozha yakabuda pamhepo pamberi pekusimbiswa kwepamutemo kubva kukambani. Iyo iri kuuya smartphone inonzi ine 120Hz yekumutsiridza mwero kuratidza. Oppo Tsvaga X4 Pro inogona kunge ichifambiswa neiyo Snapdragon 845 processor. Iyo inonzi Oppo foni inotarisirwa kuuya ne 80W inokurumidza kuchaja rutsigiro zvakare. Oppo Tsvaga X4 Pro ichabudirira Oppo Tsvaga X3 Pro iyo yakavhurwa pasi rose munaKurume gore rino.
Tipster Digital Chat Station yakatumira zvakatemwa zveOppo Tsvaga X4 Pro paWeibo. Zvinoenderana netipster, iyo iri kuuya Oppo foni icharatidza 6.7-inch ine 1440p resolution uye 120Hz yekuzorodza mwero. Sezvambotaurwa, pasi pehodhi, Oppo Tsvaga X4 Pro ingangotakura Snapdragon 845. Yakatangira, Oppo Tsvaga X3 Pro inofambiswa neSnapdragon 888 SoC.
Kune zvemaziso, Oppo Tsvaga X4 Pro inonzi inoratidzira katatu kumashure kamera unit iyo inosanganisira maviri 50-megapixel sensors uye 13-megapixel kana 12-megapixel shooter. Kune maselfies, foni inopihwa kuti ive ne32-megapixel sensor.
Zvinoenderana netipster, Oppo Tsvaga X4 Pro ichave ne12GB RAM musiyano uye inotsigira 80W nekukurumidza kuchaja. Bhatiri uye kuchengetedza ruzivo rweiyo inouya handset haina kukurudzirwa netipster.
Oppo Tsvaga X4 Pro ingangove mutsivi weOppo Tsvaga X3 Pro iyo yakatangwa munaKurume.
Oppo Tsvaga X3 Pro inomhanya paColorOS 11.2, yakavakirwa pa Android 11 OS. Iyo inoratidzira 6.7-inch QHD + (1,440 × 3,216 pixels) 10-bit yakakomberedzwa yakachinjika inoratidzira ine 120Hz yekuzorodza mwero uye kupenya kwepamusoro kwemazana mashanu nits. Sezvambotaurwa, ine Snapdragon 500 SoC pasi pehodhi, yakapetwa inosvika 888GB ye RAM uye inosvika 12GB yekuchengetedza mukati.
Oppo Tsvaga X3 Pro yemitambo ine quad rear kamera unit iyo inosanganisira maviri 50-megapixel sensors, 13-megapixel telephoto lens, uye 3-megapixel microlens sensor. Oppo Tsvaga X3 Pro ine 32-megapixel selfie kamera zvakare. Iyo mureza foni inotakura 4,500mAh bhatiri inotsigira 65W flash kuchaja.
Oppo Tsvaga X2 Pro ongororo: Zvichiri kuenderera nesimba mu2021
Oppo R17 Pro Ongororo: SuperVOOC kununura
OnePlus 9 Pro ongororo: Nailed iyo
Oppo Tsvaga X3 Pro uye Tsvaga X3 dzakateedzana: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino (Kukadzi 24)
Xiaomi's Mi 11X uye Mi 11 Pro inosundira OnePlus munzvimbo yakaoma
OPPO Reno 6 Pro ongororo: Mukuru wepakati-ranger ane dambudziko hombe
[Kwidziridzwa: Sony IMX686] OPPO Reno3 uye Reno3 Pro yakatangwa muChina iine 5G yekubatana, Quad kumashure kamera, nezvimwe
Xiaomi Mi 11 akateedzana: Hezvino zvese zvatinoziva nezve Xiaomi's 2021 mureza wekumusoro!